Paracetamol - imiyalelo kanye namathiphu ukusetshenziswa
Paracetamol (acetaminophen) ubhekwa umuthi ophephile. Lesi sidakamizwa ngowomnikazi non-kwezidakamizwa ejenti analgesic. emibi uma isetshenziswa cishe awaveli, ingasetshenziswa phakathi nokukhulelwa kanye lactation. Ngenxa yalokhu, ngokuvamile inikezwe izingane ukuze kubulawe izinzwa noma analgesic isetshenziswa ezihlukahlukene amalungiselelo ngokumelene umkhuhlane. Itholakala in amaphilisi, suppositories futhi isiraphu, ukuze ukwazi ukukhetha i-elula kunazo futhi ifomu umthamo.
Paracetamol (i-tablet) - imfundo manual
ifomu Product - amaphilisi, 500 mg, amhlophe.
isihloko International - paracetamol.
izakhiwo Pharmacotherapeutic - analgesic-antipyretic.
Paracetamol - imfundo: ukufunda
- soreness okuncane noma umfutho ngokulinganisela. Lezi zihlanganisa ubuhlungu yamazinyo, migraine, ikhanda elibuhlungu, myalgia, neuralgia, ukungakhululeki ukusha futhi ukulimala ahlukahlukene. Liphinde wabonisa ngenxa yobuhlungu esesikhathini, kanye izifo abesifazane ahlukahlukene sika.
- Yandisa lokushisa lomzimba e izifo ezithathelwanayo,, imfuluwenza kanye nezinye syndrome febrile.
- imfiva Scarlet, isimungumungwana, inkukhu Pox, abezindaba otitis, namathansela, izilonda mucosa ngomlomo, teething.
- Ngokuvamile wasebenzisa zamehlo ukwelapha izinqubo ezihlukahlukene ukuvuvukala.
Paracetamol - imfundo: Isikali
Abadala ukuthatha izidakamizwa ngesikhathi mg 500 kane emini, ukuhlaba ikhefu e ezine - amahora ayisithupha. Umkhawulo ngesikhathi, ungathatha omunye mg, esiphezulu umthamo nsuku zonke - angu ezine. Inkambo yokwelashwa - kusuka izinsuku eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa.
Effervescent amaphilisi encibilikayo ngaphambi kokusebenzisa kufanele buhlanjululwe in ingilazi yamanzi.
Izingane ezivela eziyisithupha kuya eminyakeni eyishumi nambili - 220-480 mg, komunye iminyaka eyisithupha - 110-240 mg, ezinyangeni ezintathu ziye unyaka owodwa - 20-120 MG kane emini, kulandela esingaba amahora ayisithupha. esiphezulu I umthamo wansuku zonke izingane izinyanga eziyisithupha - 350 mg enyakeni 1 - 500 mg, kuze iminyaka emithathu - 750 mg, iminyaka eyisithupha - 1g, kuze iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye - 1.5 g, kuze kube iminyaka eyishumi nambili - 2, eliqinisekile kuphela okufanele zicatshangelwe ukuthi imithamo zisikisela khona ukuthi kunezizathu sina ngoba isicelo sabo.
Izingane ukufika ezinyangeni ezintathu ukunikeza paracetamol Kunconywa kuphela kadokotela, 10 mg ngayinye kg.
Paracetamol - Ukufundiswa: Izimo
Isici esiyingqayizivele ama-NSAID, utshwala, ukungasebenzi kwezinso, igazi kakhulu, yokwehluleka kwesibindi, leukopenia, isifo sikashukela.
Paracetamol has cishe akukho Izimo, kodwa sidinga ukuba anake umthamo yezifo ezihlukahlukene.
Paracetamol akuyona contraindicated phakathi nokukhulelwa kanye lactation, kodwa ukusetshenziswa eside Kunconywa uye kudokotela uyofuna icebiso.
Paracetamol - Ukufundiswa: side effects
Umuthi kungabangela thrombocytopenia, agranulocytosis, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, pyuria aseptic, colic kwezinso, ukusabela okuhlukahlukene nomzimba. Futhi iyatholakala kukhona ubuhlungu epigastric, isicanucanu. Lapho ukusabela eqinile enqabayo Kunconywa kudokotela noma umthamo ephansi.
Paracetamol (isiraphu) - Iziyalezo yokusetshenziswa
Ngokuvamile, lolu hlobo imithi isetshenziswa ukwelapha izingane. isinyathelo kwemithi ke kuyafana in amaphilisi - antipyretic, analgesic anti-abampofu.
I izinkomba main ukusetshenziswa - imfiva fever ohambisana yizifo ezihlukahlukene ezithathelwanayo kanye ukuvuvukala.
Umthamo - Izingane ezivela izinyanga ezintathu - ithisipuni elilodwa, unyaka ongu-1 - amathisipuni amabili, kusukela kwabaneminyaka engamashumi ayisithupha kuya kwengu-14 - amathisipuni amabili kuya kwamathathu izikhathi ezimbili noma ezintathu emini. Inkambo ingathatha izinsuku ezingu-zi oyedwa kuya kwabahlanu.
Izimo futhi side effects ke kuyafana ukuthi we zithutha, nakuba izilinganiso ezincane.
Medicine 'Flixonase'. imfundo
Pfayfer Mishel: Filmography umdlali waseshashalazini. Ukuphakama, isisindo udumo
Izindaba Economic eKhabarovsk
Ifayela System Inhlangano sediski